Fanafainganana ny fampiroboroboana vokatra mpamokatra fiara / Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Fanafainganana ny fampivoarana ny vokatra mandeha ho azy
Mifototra amin'ny prototyping automotive ho an'ny serivisy feno izay namela anay hanitatra ny fahalalantsika sy ny zavatra niainantsika tamin'ity faritra ity ny CreateProto. Na inona na inona fanaporofoana ny famolavolana hevitra ho an'ny fizahana injenieran'ny singa mekanika, na avy amin'ireo prototypes jiro ivelany na prototypes anatiny, afaka manampy amin'ny ambaratonga rehetra isika.
Mandresy ny tsingerin'ny famokarana vokatra tsy mitsaha-mitombo ary mamorona fitoviana amin'ny rojom-pamokarana amin'ny alàlan'ny prototyping haingana sy ny famokarana ambany
Mivoatra haingana ny indostrian'ny fiara. Satria ny firoboroboan'ny indostria toy ny mitondra fiara mahaleo tena, ny fifandraisana eo an-tsambo, ary ny fiara mifono hybrid / herinaratra dia mitohy mitarika fanavaozana, ireo orinasan-tsarimihetsika mandehandeha miasa saina dia mitodika any amin'ny CreateProto hanafainganana ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ary hamonjy haingana kokoa ny tsena. Miaraka amin'ny famokarana dizitaly haingana sy ny valiny fanamboarana mandeha ho azy, ny mpamorona sy ny injeniera dia afaka manalefaka ny risika amin'ny famolavolana sy ny vidiny ary mamorona rojom-pivarotana mora mandray kokoa mba hamaly tsara kokoa ny fangatahan'ny mpamily sy ny mpandeha ho an'ny fiara namboarina kokoa.
Fanavaozana mandeha ho azy Prototyping mitondra fiara
Ny prototyping dia manafaingana ny dingana fampivoarana ny fiara
Ny indostrian'ny fiara dia indostria sarotra sy goavana, miatrika fanerena amin'ny tsena dia mitaky famerenana famolavolana matetika sy fivoaran'ny endrika vaovao. Na izany aza, ny famolavolana fiara sy ny fampandrosoana dia dingana maharitra, noho izany ny prototyping haingana sy mahomby dia tetezana tsy maintsy ananana ho azy. Ny prototype automotive dia maneho dingana iray lehibe amin'ny fizotran'ny fanamarinana eo amin'ny famolavolana ny vokatra voalohany sy ny fihazakazahana famokarana farany.
Raha ny tena izy, ny prototyping otomotif dia tsy vitan'ny hoe mitana andraikitra lehibe mandritra ny fizotran'ny fanamarinana ny endrika, fa miantoka ihany koa ny fanamboarana ny faritra miaraka amin'ny fitaovana mety indrindra ary ny fanombanana ny fizotry ny famokarana.
Ny prototypes otomotif dia ampahany lehibe amin'ny fizotran'ny injenieran'ny fiara mandeha amin'ny fiara izay mamela ny injeniera hamantatra ny fomba hanaovana vokatra otomotif vaovao manintona ny mpanjifa, hampita hevitra amin'ireo mpandray anjara sy ekipan'ny tetikasa haingana kokoa sy mahomby, ary hanaporofoana ny lanjan'ilay endrika hametrahana mpampiasa vola sy mpanjifa.
Raha ny tena izy, ny famokarana prototype automotive dia mihazakazaka hatrany amin'ny dingana manontolo amin'ny famolavolana fiara sy ny fampandrosoana cycle, anisan'izany ny porofon'ny foto-kevitra, ny sary an-tsary ny modely nomerika CAD, ny firafitra sy ny fanamarinana ny zava-bita, ny fizahana sy ny fizahana injeniera, ary na dia ho an'ny famokarana sy ny famokarana aza. fanamarinana dingana.
Prototype Concept Automotive sy Model Digital CAD
Mandritra ny famolavolana hevitra sy ny fizarana modely 3D CAD, ny mpamorona fiara dia mahatsapa ny hevitra amin'ny zavatra tena izy amin'ny alàlan'ny famoronana prototypes mizana amin'ny endrika maodely tanimanga. Izy io dia afaka manome azy ireo fotokevitra niniana natao tamin'ny sehatry ny famolavolana hevitra. Taty aoriana ny teknikan'ny injeniera mivadika dia hampiasaina amin'ny fitiliana ny maodely hahazoana ny maodelin'ny CAD ary hanatsara ny endriny.
Ity resadresaka nifanaovana teo amin'ny famolavolana sy ny prototype automotive ity dia miteraka dingana miverimberina izay ahitan'ny fitaovana tsirairay fotoana sy olana vaovao hitrandrahana sy hanadio bebe kokoa, ary manampy ny mpamorona hahatakatra tsara ny traikefan'ny mpampiasa. Miasa ivelany izany - fampisehoana amin'ny mpanjifa sy ny mpiray antoka aminy - ary anatiny - amin'ny fiaraha-miasa lalindalina kokoa amin'ny ekipanao, na ny famoriana azy ireo hanohana hevitra vaovao.
Ny firafitra sy ny fanamarinana ny asa ho an'ny fiara mandeha amin'ny fiara
Raha vantany vao voamarina ny famolavolana hevitra, ny dingana famolavolana injeniera dia mila prototype voadio kokoa hamaritana ny fampiasana ny vokatra ary hampandeha ireo fanamby amin'ny famolavolana.
Indraindray ny injeniera mandeha amin'ny fiara dia miantso azy io ho "dingana ampondra." Mandritra io dingana io, ny injeniera dia hamorona andianà prototypes mandeha ho azy ary hametraka ireo vokatra prototype ao anaty fiara misy. Araka ny fivoaran'ny modely samihafa sy ny fampiasana ny ampondra, ny prototype dia matetika ampiasaina amin'ny fizahana endrika mety amin'ny haben'ny singa sy ny fanangonana tahiry fampisehoana voalohany amin'ny fiara.
Ity paikady ity dia ahafahan'izy ireo mahita ny fomba fampidirana ilay prototype automotive ao anaty fiara sy hifaneraserana amin'ireo faritra hafa, ary hanampy amin'ny fanombanana ny famolavolana, ny fitaovana, ny tanjaka, ny fandeferana, ny fivoriana, ny mekanisma miasa ary ny famokarana.
Fitsapana injeniera sy fanamarinana mialoha ny famokarana
Alohan'ny hidiran'ny ampahany amin'ny fiara dia ny mpamorona injeniera dia hamorona prototypes fitsapana injeniera kely sy singa famokarana mialoha ny famokarana ny vokatra farany, ary hamerina haingana ny endrik'izy ireo arakaraka ny fitsapana sy ny valiny tena izy mba hahatratrarana ny zava-bita ilaina, fanamarinana, fanandramana, fanamarinana. ary ny fepetra takiana amin'ny kalitao.
Ny prototype automotive dia tena ilaina amin'ny fitsapana fiarovana. Ireo fiara prototype mitondra ny ampaham-panandramana dia apetraka amin'ny toe-javatra samihafa ary iharan'ny fepetra faran'izay mafy hamantarana izay olana mety hanakana ny fampiasana ny vokatra na hiteraka ahiahy mafy amin'ny mpanjifa.
Mandritra izany fotoana izany, ny famoronana singa famokarana ambany be ho an'ny fihodinan'ny mpanamory vokatra otrikaretina vaovao dia ahafahan'ny injeniera mahita ny olan'ny famokarana mety ary hamaritra ny fizotry ny famokarana lafo indrindra.
Inona avy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny fampiharana automatique?
Thermoplastika. Misafidiana thermoplastics an-jatony ao anatin'izany ny PEEK, acetal, na manome ny fitaovanao manokana. Tazomy ny marika miaraka amin'ny loko manokana ho an'ny tetikasa mahafeno fepetra.
Vola vita amin'ny silipo vita amin'ny rano.Ny fitaovana vita amin'ny silipo vita amin'ny silika toy ny fluorosilôna tsy mahazaka solika dia azo ampiasaina amin'ny gasket, tombo-kase ary fantsona. Misy fehin-kibo silika mazava momba ny optika koa azo ampiasaina ho an'ny fampiharana solomaso sy jiro.
Nylons.3D prototypes miasa amina pirinty miasa amin'ny fitaovana maro nylon azo alaina amin'ny alàlan'ny laser sinter sy Multi Jet Fusion. Ny nilona feno mineraly sy feno vera dia manatsara ny toetra mekanika rehefa ilaina.
Aluminium. Ity metaly asa rehetra ampiasaina amin'ny fandanjana maivana ity dia manome tahan'ny lanjan'ny lanjany tsara ary azo ampiasaina amin'ny milina na 3D vita pirinty.
Fa maninona no CreateProto ho an'ny fampandrosoana fiara-miasa?
Mampihena ny risika famolavolana amin'ny alàlan'ny fandikana haingana sy ny prototyping amin'ny fitaovam-pamokarana nefa tsy mahafoy ny hafainganam-pandehan'ny fampandrosoana.
Fifanarahana azo atao amin'ny rojom-bidy
Mahazoa fanampiana ilain'ny fangatahana vonjy taitra midina, fahatsiarovana ampahany, na fikorontanana hafa amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fampiasana teny namboarina, fitaovana haingana, ary faritra famokarana ambany.
Manamarina ny geometry ampahany amin'ny safidy antontan-taratasy kalitao maro. Azo jerena ny fanaraha-maso nomerika, ny PPAP, ary ny FAI.
Ampiharo ny famokarana haavo ambany mba ahafahana manasongadina fiara sy fiara mifandraika kokoa amin'ny mpamily maoderina.
Hatsarao ny fizotry ny famokarana mba hamoronana automatique lehibe kokoa sy fanamafisana ny fivondronan'ny singa miaraka amina fametahana manokana.
Ny Teknolojia Prototyping Automotif an'ny CreativeProto isaky ny teboka eo am-panaovana anao
Miaraka amin'ny fahaizana momba ny injeniera sy ny prototyping maherin'ny 10 taona, Miroborobo amin'ny tetikady sarotra ara-teknika ho an'ny injenieran'ny prototype automotive i CreateProto. Miezaka izahay mba ho mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny vokatra tsara indrindra amin'ny sehatry ny fiara. Manam-pahaizana manokana amin'ny fivoaran'ny prototyping automotive isan-karazany sy ny haitao famokarana haingana izahay, manome ny masinina CNC, fanontana 3D, fanariana fantsom-bokatra, fanamboarana aliminioma haingana, famolavolana tsindrona ambany ary fanodinana vy, izay mitazona ny sisiny mifaninana amin'ny serivisy vaovao sy ireo mpiasa tena mahay. . Hiara-miasa izahay - ary miaraka aminao - mandritra ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny fiara sy ny fampandrosoana.
Avy amin'ny esoeso feno izay misy dashboard, consoles, vavahady varavarana ary andry ivelany toy ny bumper, grilles, jiro ary prototypes jiro, ny ekipanay dia miantehitra amin'ny portfolio -n'ny fizotran'ny milina mandroso ary mampifangaro azy ireo amin'ny alàlan'ny famitana ny tany, nentim-paharazana fahaiza-manao, ary fahalalana-lalindalina amin'ny fanohanana amin'ny ambaratonga rehetra ho an'ny indostrian'ny fiara.
Ny fanananay lehibe indrindra dia ny mpanjifanay izay nitombo haingana tamin'ny alàlan'ny vavan'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao. Reharehantsika izahay ary nomem-boninahitra hanome vahaolana feno amin'ny famokarana prototype ho an'ny sasany amin'ireo mpanamboatra fiara-mandeha malaza eran-tany sy mpamatsy ambaratonga voalohany, toa an'i BMW, Bentley, Volkswagen, Audi ary Skoda. Ny tanjonay dia ny hihoatra ny andrasan'ny mpanjifa ary hanampy azy ireo hahomby amin'ny sehatry ny tsena.
FAMPIHARANA AUTOMOTIF iraisana
Ny fahaizantsika manamboatra dizitaly dia manafaingana ny fivelaran'ny singa vy sy plastika mandeha amin'ny fiara. Ny sasany amin'ireo fampiharana fiara mahazatra dia misy:
Fizarana tsipika fivoriambe
Fefy sy trano fonenana
Ireo singa vita amin'ny plastika
L lens sy ny jiro fiasa
Fanohanana ny elektronika ho an'ny mpanjifa an-tsambo
-Automakers: amin'izao andro izao dia mila fampisehoana misimisy kokoa ao anaty fonosana kely kokoa. Izany no fanambinay, ampidirina ao anatin'io fonosana kely io avokoa ireo fiasa rehetra ireo.
JASON SMITH, DESIGNER, Vondron'asan'ny rafitra mifehy ny vatana
Cnc Prototyping, Prototyping haingana sy famokarana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana,